Oviana marina no teraka i Jesosy - Fiangonan'Andriamanitra Soisa manerantany
haino aman-jery > Journal succession > 2014-04 mpandimby ny Magazine > Oviana i Jesosy no teraka?
Amin'ny vanim-potoanan'ny Advento, ny ankamaroan'ny paroasy dia ao anatin'ny fanisana ny andro nahaterahan'i Jesosy: manisa ny andro mandra-pahatongan'ny Krismasy. Tsy mahazatra ny mandre resaka momba ny faha-2 na tsia4. Ny volana desambra no andro mety hankalazana ny nahaterahan’i Jesosy Kristy ary raha mety ny hankalazana izany andro izany mihitsy. Tsy vaovao ny fitadiavana ny taona sy volana ary andro nahaterahan’i Jesosy. Efa roa arivo taona teo ho eo no nianaran’ny teolojiana izany, ary indreto ny sasany amin’ny hevitr’izy ireo.
Clément avy any Aleksandria (manodidina ny 150-220) dia nanome daty isan-karazany, anisan’izany ny 18 Novambra, 6 Janoary, ary ny andron’ny Paska, izay miankina amin’ny taona, ny 2 Desambra.1. Martsa, 24. / 25. Aprily na 20 Mey.
Sextus Iulias Africanus (manodidina ny 160-240) no antsoina hoe faha-25. Martsa
Hippolyte avy any Roma (170-235), mpianatr’i Irénée, dia nanonona andro roa samy hafa tao amin’ny fanehoan-keviny momba ny Bokin’i Daniela:5. Desambra), tamin’ny andro fahefatra (alarobia), natao teo ambany fitondran’i Aogosto tamin’ny taona 5500. 2. Aprily no nomena ho daty.
Araka ny fanambaran’ilay mpahay tantara jiosy Flavius ​​​​Josephus, dia misy milaza ny nahaterahan’i Jesosy tamin’ny vanim-potoana nanomboka tamin’ny Jan.2. Martsa hatramin'ny 11. Aprily tamin’ny taona 4 al.f.i., hatramin’ny nahaterahan’i Kristy tamin’i Heroda talohan’ny nahafatesan’i Heroda.
Jaona Chrysostome (manodidina ny 347-407) no antsoina hoe faha-25. Desambra ho daty nahaterahana.
Ny 28 martsa no voatonona ao anatin'ny kajy ny Passion, asa tsy fantatra anarana angamba avy amin'ny avy any Afrika Avaratra.
Augustin (354-430) dia nanoratra tao amin’ny De Trinitate fa “heverina fa amin’ny5. Voaray ny volana martsa. Tamin'ny andro izay niaretany ihany koa ary araka ny lovantsofina tamin'ny faha-25. Teraka ny Desambra ”.
Nanonona andro nahaterahana maromaro ny Jiosy mesianika. Ny fiheverana misolo tena indrindra dia mifototra amin’ny fanompoan’ny mpisorona (ny marimarina kokoa: “avy amin’ny fanaon’i Abia” (Lioka 1,5). Io fomba fanao io dia mitarika azy ireo hanitsy ny nahaterahan'i Jesosy amin'ny Sokota / Fetin'ny Tabernakely. Tamin’ny andro fahavalon’ny fety no nanaovana ny famorana azy.
Mahaliana ny maminavina fa mety ho teraka (na torontoronina) i Jesosy nandritra ny Paska na ny fetin’ny trano rantsan-kazo. Tiako ilay hevitra hoe namadihan'i Jesosy ny asan'ny Anjelin'ny Fahafatesana raha nitranga tamin'ny Paska izany. Hisy symmetry mahafa-po ny fahatongavany rehefa torontoronina na teraka nandritra ny fetin’ny trano rantsankazo. Tsy ampy anefa ny porofo azo antoka ny amin’ny andro nahatongavan’i Jesosy teto an-tany, fa angamba noho ny porofo kely ananantsika, dia azo atao ny tombantombana tsara.
Ao amin’ny Lioka 2,1-5 azontsika vakiana fa ny mpanjaka Aogosto dia namoaka didy momba ny fandoavan-ketra ho an’ny Fanjakana Romana ka noho izany dia tokony hiverina any an-tanànany avy ny tsirairay handoa izany hetra izany. Niverina tany Betlehema, toerana nahaterahan’i Jesosy, koa i Josefa sy i Maria. Azo heverina fa tsy nisy na oviana na oviana teo amin’ny tantara ny fanisam-bahoaka toy izany. Tsy tokony ho nifanojo tamin’ny fotoam-pijinjana rahateo izany. Azo heverina ihany koa fa tsy ho natao tamin’ny ririnina ny fanisam-bahoaka toy izany raha nanasarotra ny dia ny andro. Tamin'ny lohataona dia nokolokoloina ny tany. Azo inoana fa ny fararano, taorian’ny taom-pijinjana, dia fotoana nanaovana fanisam-bahoaka toy izany ary koa fotoana nahaterahan’i Jesosy. Na izany aza, tsy fantatra mazava avy amin’ireo andinin-teny ao amin’ny Baiboly hoe hafiriana no nijanonan’i Maria sy Josefa tao Betlehema. Mety ho teraka herinandro maromaro taorian’ny fanisam-bahoaka koa i Jesosy. Amin'ny farany, tsy afaka mamaritra mazava tsara ny daty nahaterahan'i Jesosy isika. Mifikitra amin’izany fisalasalana izany ny mpaneso, ka milaza fa angano fotsiny ny zava-drehetra ary tsy nisy mihitsy i Jesosy. Na dia tsy azo lazaina mazava aza ny daty nahaterahan’i Jesosy, dia mifototra amin’ny zava-nitranga azo hamarinina ara-tantara ny nahaterahany.
Hoy ny mpahay siansa ara-Baiboly FF Bruce momba ny fisalasalana:
"Ny mpanoratra sasany dia milalao ny hevitra ny angano Kristy, saingy tsy noho ny porofo ara-tantara no anaovany izany. Ny maha-ara-tantara an'i Kristy dia axiomatika, izany hoe, tsy azo porofoina izany ary tsy mila porofo toy ny toetran'i Julius Caesar. Tsy ny mpahay tantara no mampiely ny angano momba an’i Kristy” (ao amin’ny The New Testament Documents, p. 123).
Fantatry ny olona tamin’ny andron’i Jesosy avy tamin’ireo faminaniana hoe rahoviana no hiandry ny Mesia. Kanefa na ny faminaniana na ny filazantsara dia tsy mamaritra ny daty marina hahatongavan’ny Mesia, na dia tian’ny mpahay tantara maoderina aza izany. Tsy zava-kendren’ny Baiboly ny hanome antsika fotoana marina, satria afaka “mampianatra anareo [...] ho amin’ny famonjena amin’ny finoana an’i Kristy Jesosy” izy io ().2. Timoty 3,15).
Ny tena ifantohan'ny mpanoratra ao amin'ny Testamenta Vaovao dia tsy ny nahaterahan'i Jesosy, fa Andriamanitra Ray nandefa ny zanany lahy teto an-tany tamin'ny fotoana marina teo amin'ny tantara hitana ny fampanantenany sy hanafaka ny famonjena.
Hoy ny apostoly Paoly:
“Rehefa tonga ny fotoana, dia nirahin’Andriamanitra ny Zanany, natera-behivavy, ka nampanaovin’ny lalàna, mba hanavotra izay ambanin’ny lalàna, mba hanan-janaka isika” (Galatiana). 4,4-5). Izao no vakintsika ao amin’ny Filazantsaran’i Marka: “Ary rehefa voafatotra Jaona, dia nankany Galilia Jesosy ka nitory ny filazantsaran’Andriamanitra ka nanao hoe: Efa tonga ny fotoana, ka efa akaiky ny fanjakan’Andriamanitra. Mibebaha ary minoa ny filazantsara” (Mar 1,14- iray).
Mahaliana ny tantara ny fahafantarana ny daty nahaterahan'i Kristy, fa tsy mitombina tanteraka amin'ny teolojika. Tokony ho fantatsika fotsiny hoe nitranga izany ary ny antony nahaterahany. Mamaly an'ireo fanontaniana ireo ny Baiboly. Avelao hiambina hatrany io vanim-potoana hiatrehana ny vanim-potoana ho avy io isika fa tsy hifantoka amin'ny antsipirihany kely.